Molecular Biology Zviwanikwa Pamhepo | Karman® Mawiricheya
Molecular biology ibazi resainzi iro rinoongorora masisitimu ehupenyu padanho remamorekuru. Iyo purview ye molecular biology inowanzo kuwanda neminda senge biochemistry uye genetics, nekuti mamorekuru biology anonyatsoongorora maseru maseru uye kusangana kwavo kwakaomarara. Mapuroteni biosynthesis, DNA, uye RNA mapatani anoongororwawo nema molecular biologist.
Molecular Biology: Tsanangudzo yemamorekuru biology.
A Molecular Biology Glossari: Inopa mazwi uye tsananguro zvine chekuita nemadhigiramu akati wandei.
Molecular Biology muMarine Sayenzi: Mibvunzo yesainzi, nzira dzehunyanzvi, uye zvazvinoreva.
Nhoroondo yeMorekuru Biology
Zita rekuti mamorekuru biology rakagadzirwa muna 1938 naWarren Weaver weRockefeller Foundation's Natural Sciences department. Kunyangwe zvidzidzo mu molecular biology zvakatanga kare kuma1930, zvakatozosvika kuma1950 apo nhanho huru dzakatorwa mumunda. Rockefeller Institute yakabatsira kuwedzera mamorekuru biology nekubhadhara akati wandei mamorekuru biology ekutsvagisa mapurojekiti. Iko kufambira mberi kweX-ray crystallography kwakabatsira zvakanyanya kuisirwa mamorekuru biology futi. Muma1960, nyanzvi dzezvipenyu dzakazobudirira kupatsanura, kuisa hunhu, uye kunyange kugadzirisa mamorekuru maseru akadai seDNA.
Molecular Biology Nhoroondo: Nhoroondo pfupi yesero uye mamorekuru biology.
Nhoroondo Yekutanga yeMorekuru Biology: Zvimwe nezve kwakatangira mamorekuru biology.
Genetics uye Molecular Biology: Nguva yenguva yenhoroondo yegeneti uye mamorekuru biology.
Warren Weaver: Ine tsamba, dzakaburitswa mapepa, zvinyorwa zviri pamutemo naWarren Weaver.
Cell Biology: Nhanganyaya uye nhoroondo yesero biology uye molekyuli biology.
Molecular Biology Evolution: Iko kushanduka kwemorekuru biology kuita masystem biology.
Ipfupi Nhoroondo yeMorekuru Biology: Nhoroondo ipfupi yeiyo mamorekuru biology uye genetics ye cyanobacterial chepfu.
Iyo yepakati Imbwa yeMorekuru Biology
Muna 1958, Francis Crick akataura dzidziso yepakati yemamorekuru biology. Shure kwaizvozvo, akataura zvakare dzidziso yepakati muna 1970. Dzidziso yepakati inotsanangura ruzivo rwakateedzana chinja maererano neshanduro yakadzama yemasara. Inotizve iro ruzivo harugone kuchinjwazve kubva kuprotein kuenda kune nucleic acid kana protein. Kuti unzwisise zvirinani hwaro hwekuteedzana ruzivo rwekuchinjisa hune ma biopolymers, dzidziso yepakati inowanzo shandiswa. Iyo yepakati dzidziso inokamuranisa biopolymers mumapoka matatu, anoti DNA, RNA, uye mapuroteni. Zvakare, dzidziso yepakati inoenderera ichipatsanura mapoka aya muzvikamu zvitatu: iyo mitatu yekuchinjisa, iyo mitatu yekuchinjisa, uye matatu asingazivikanwe kuendeswa.
Iyo Central Imbwa: Pepa rekutanga naFrancis Crick.
Francis Crick: Hupenyu hwake pawebhusaiti yepamutemo yeNobel Prize.
DNA: Inotsanangura kuwanikwa kweDNA.
Coral Genomics: Chirevo chikuru chemamorekuru biology chinotsanangurwa kubva pakuona kwema coral genomics.
Microarrays Central Imbwa: Iyo hurukuro pane yepakati dzidziso yemamorekuru biology.
Molecular Biology Basics: Inotsanangura iyo yepakati dzidziso ye molecular biology.
Molecular Biology Matekiniki
Kune huwandu hwehuwandu yakakosha mamorekuru biology michina inobatsira masayendisiti kupatsanura kana kushandisa mamorekuru maseru ezvinhu.
Tsananguro Cloning - Iyi nzira inoonekwa seyakakosha nzira yekufunda mapuroteni mabasa. Mune ino hunyanzvi, protein yeDNA coding inosanganisirwa mune yekutaura vector inonzi plasmid. Iyi plasmid inogona kana inogona kunge iine inosimudzira zvinhu zvekugadzira protein yekufarira.
Tsananguro Cloning: Kutsanangudza kuumbana kwegonzo B2 bradykinin receptor.
Polymerase Chain Reaction - Iyi nzira inoshandiswa pakutevedzera kweDNA sezvo iri musiyano. MuPCR, kuteedzana kweDNA kunogona kutevedzwa zvirinyore zviuru kana kutogona kuchinjwa.
Polymerase Chain Reaction: Iyo yakazara PCR uye Multiplex PCR Nongedzo.
Gel Electrophoresis - Iyi nzira inoenderana nepfungwa yekuti minda yemagetsi inogona kupatsanura mapuroteni, DNA, uye mamorekuru eRNA. Iyo agarose gel electrophoresis ndiyo nzira iyo agarose gel inoshandiswa kupatsanura RNA neDNA.
Gel Electrophoresis Virtual Lab: Iyo gel electrophoresis inoshandiswa sei mune forensics.
Maodzanyemba Kudzima - Maodzanyemba Blotting ndiyo nzira yekutsvaga imwe nhevedzano yeDNA irimo mune yeDNA sampuro. Mushure mekunge masampuli eDNA apatsanurwa nejel electrophoresis, anoendeswa kune membrane nekudzima.
Maodzanyemba Blot Nzira: Pfupiso pfupiso yemaitiro eSouthern Blot.
Kuchamhembe Blotting - Iyo yekuchamhembe blotting michina inobatsira mukunzwisisa kuri nani kweiyo chaiyo RNA molekyuru yekutaura maitiro.
Maitiro Ekuchamhembe Blot: Ruzivo kugadzirisa RNA uye nzira yekuchamhembe Blot.
Western Blotting - Kumavirira kudzima, zvidiki zveprotein zvinowiswa mumitambo yemhuka senge mbeva, ichigadzira masoja ekudzivirira eprotein. Kana yagadzirwa na kushandisa mhuka sevamiriri, dzinodaidzwa kuti polyclonal antibodies uye kana dzikaburitswa musero tsika, dzinozivikanwa se monoclonal antibodies.
Western Blotting: Sumo yeWestern Blot chiitiko.
Kumabvazuva Blotting - Protein's post-translational modification inogona kuzivikanwa neiyo yekumabvazuva nzira yekudzima. Iwo mashoma mashoma substrates anoshandiswa kuongorora kugadziriswa kwemapuroteni akadzimwa.
Yekuwedzera Ruzivo uye Matekiniki
Kudhinda kweminwe yeDNA: Inotsanangura hunyanzvi hwema molecular biology.
unyanzvi: Zvimwe pamusoro pemaitiro kubva kuAdvanced Molecular Biology Techniques Laboratory.
Molecular Biology Zviwanikwa: Matekiniki, matipi, uye mibvunzo zvine chekuita nemamorekuru biology.
Ichi chinyorwa chinounzwa kwauri na1800wiricheya; tinopa kutakura zvigaro, magetsi maguru,mobility scooters, & vanofamba.